JBBL स्मार्ट बैंकिंङ्ग के हो? यसको लागि म किन आवेदन दिने?
JBBL (ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड) स्मार्ट बैंकिंङ्ग एक सुविधाजनक र सुरक्षित मोबाइल बैंकिंङ्ग सेवा हो जसको सहायताले तपाईं आफ्नो मोबाइल उपकरणमा ईन्टरनेट वा GPRS र SMS मार्फत तपाईंको खाताहरूमा तत्काल पहुँच पाउन सक्नुहुनेछ।
JBBL स्मार्ट बैंकिंङ्गका विभिन्न सुविधाहरू के हुन्?
JBBL स्मार्ट बैंकिंङ्गले कुन च्यानलहरुलाई समर्थन गर्दछ? के म यो बिदेशबाट प्रयोग गर्न सक्छु?
JBBL(जेबीबीएल) स्मार्ट बैंकिंङ्गले ईन्टरनेट / GPRS(जीपीआरएस) र SMS(एसएमएस) मोडहरुलाई समर्थन गर्दछ। एसएमएस मोडको मामलामा हरेक अनुरोधमा एउटा SMS(एसएमएस) पथाइन्छ र प्रतिक्रियापनि एसएमएसबाट प्रदान गरिन्छ। इन्टर्नेट / जीपीआरएस मोडका लागि अनुरोध इन्टरनेट (WI-FI(वाइफाइ), GPRS(जीपीआरएस)/3G/4G) मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। तसर्थ, GPRS(जीपीआरएस) मोडको सहायताले तपाईं यो सुबिधा विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
JBBL स्मार्ट बैंकिंङ्गको लागि कसरी दर्ता गर्न सकिन्छ?
बैंकको कुनै पनि खातावालाले नजिकको JBBL(जेबीबीएल) बैंकको शाखामा गएर JBBL(जेबीबीएल) स्मार्ट बैंकिंङ्गको लागि दर्ता गर्न सक्दछन्। एक पटक तपाईंको प्रयोगकर्ता बैंकद्वारा सिर्जना भएपछि तपाईंको JBBL(जेबीबीएल) स्मार्ट बैंकिंङ्ग सक्रियको लागि एक SMS सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईंले JBBL(जेबीबीएल) स्मार्ट बैंकिंङ्ग एप्लीकेसन डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र आफ्नो खाता सक्रिय गर्नुपर्नेछ।मोबाइल दर्ताको लागि Let's Get Started (सुरु गरौं) लिंक क्लिक गर्नुहोस्र र तपाईंको मोबाइल नम्बर र खाता नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईंले एसएमएसद्वारा OTP (वन-टाइम-पासवर्ड) प्राप्त गर्नु हुनेछ।यो ओटिपी प्रयोग गरेर, तपाइँले लगइन पासवर्ड र transaction पिन सेट प्राप्त गरिसके पछि सेवा सुचारु गर्न सक्नु हुनेछ।
JBBL बैंक स्मार्टको लागि के शुल्क छ?
JBBL स्मार्ट बैंकिंग र चेतावनी सेवाको लागि संयुक्त वार्षिक शुल्क रु. २००.०० मात्र हो।
लगइन पासवर्ड र MPIN(एमपिन) बीचमा के भिन्नता छ?
लगइन पासवर्ड तपाईको उपकरणमा ईन्टरनेट / GPRS(जीपीआरएस) मोडबाट लगईन गर्न प्रयोग हुने पासवर्ड हो। लगइन गर्दा यदि तपाईं कुनै वित्तीय सेवाहरू कार्यान्वयन गर्न चाहानुहुन्छ जस्तै कोष स्थानान्तरण, टपअप्स, भुक्तान, इत्यादिको लागि तपाईंले MPIN(एमपिन)को प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै, यदि तपाईं SMS(एसएमएस) मोड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले प्रत्येक अनुरोधको लागि MPIN(एमपिन) राख्नु पर्दछ।
के म JBBL स्मार्ट बैंकिंङ्ग दर्ता भएको सिम भन्दा अर्को सिम प्रयोग गरेर प्रयोग गर्न सक्दछु?
तपाईले JBBL स्मार्ट बैंकिंङ्ग SMS(एसएमएस) मोडको मामलामा दर्ता भएको सिम भन्दा अन्य सिम प्रयोग गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। जबकि GPRS(जीपीआरएस) मोडको मामलामा पनि यो सम्भव छ तर तपाईंलाई कुनै पनि JBBL बैंकको शाखामा तुरुन्तै सम्पर्क राखी तपाईंको मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न सुझाव दिइन्छ।
यदि मैले मेरो मोबाइल उपकरण परिवर्तन गरे वा प्रणाली अपग्रेड गरे भने, यसले अनधिकृत प्रयोगकर्ता किन भन्छ?
कुनै पनि अनधिकृत पहुँचबाट बच्न, हामी पहिलो लगईनमा तपाईंको मोबाइलको IME(आईएमई) ID(आईडी) स्टोर गर्दछौं। यसैले, यदि मोबाइल उपकरण परिवर्तन भएमा वा प्रणाली अपग्रेड भएमा, JBBL स्मार्ट बैंकिंग प्रयोग गर्न सकिदैन । नयाँ उपकरणबाट JBBL स्मार्ट बैंकिंग प्रयोग गर्नको लागि कि त तपाइँको उपकरण पुनःसेट गर्नको लागी बैंकमा अनुरोध गर्नुपर्दछ वा तपाइँ आँफैले रिसेट गर्न लगइन पृष्ठमा भएको Reset Device(रिसेट दिभाइस) क्लिक गरेर रिसेट गर्नुपर्दछ।
म एक दर्ता भएको प्रयोगकर्ता हो तर जब म SMS(एसएमएस) मोड मार्फत अनुरोध गर्दछु यसले दर्ता नगरिएको प्रयोगकर्ताको रूपमा त्रुटि सन्देश दिन्छ, किन?
सामान्यतया, त्रुटि सन्देश उत्पन्न हुन्छ यदि तपाईंले DUAL(डुअल) सिम मोबाइलको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। DUAL(डुअल) सिम मोबाईलहरूको मामलामा, JBBL(जेबीबीएल) स्मार्ट बैंकिंङ्ग अनुप्रयोगले तपाईंको पूर्वनिर्धारित सिमबाट सन्देश पठाउँदछ। त्यसैले, तपाईले JBBL(जेबीबीएल) स्मार्ट बैंकिंङ्गमा पंजीकृत नम्बरको साथ आफ्नो पूर्वनिर्धारित सिम परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंले आफ्नो मोबाइल सेटअपबाट पूर्वनिर्धारित सिम सेट गर्न सक्नुहुन्न भने या त सिमको स्लट परिवर्तन गर्नुहोस् वा नजिकको JBBL(जेबीबीएल) बैंकको शाखामा जानुहोस् रेजिष्टर्ड मोबाइल नम्बर अर्कोमा परिवर्तन गर्नहोस्।
मैले किन PIN(पिन) समाप्ति र पासवर्ड समाप्ति सन्देशहरू पाउँदैछु?
बैंकको सुरक्षा नीति अनुसार JBBL स्मार्ट बैंकिको पासवर्ड / पिन प्रत्येक ९० दिनमा समयावधि सकिन्छ ताकि ग्राहकहरूलाई उनीहरूको पासवर्ड / पिन आवधिक रूपमा परिवर्तन गर्न बाध्य तुल्याओस्। एसएमएस मोडमा तपाईले सेन्टींग गर्नु पर्नेछ र transaction PIN परिवर्तन गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै पासवर्डको लागि तपाईले इन्टरनेट / GPRS(जीपीआरएस) मोडमा अवस्थित पासवर्डको साथ लगइन गर्न आवश्यक पर्दछ र तपाईले पुरानो पासवर्डको ठाउँमा हालको अवस्थित पासवर्ड राख्नु पर्दछ र नयाँ पासवर्डमा तपाईले चाहेको नयाँ पासवर्ड राख्नु पर्दछ।
मैले कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्दछ?
JBBL स्मार्ट बैंकिंङ्ग प्रयोग गर्दा तपाइँ ग्राहकले केही ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरु यी हुन्:
तपाईको लगईन पासवर्ड र लेनदेन पिनको गोपनीयता तपाईको उत्तरदायित्व हो। कृपया यसलाई अरूसँग सेयर नगर्नुहोस्। यो सुझाव गर्छौ कि तपाई यसलाई कण्ठ गर्नुहोस् र तपाईंको सन्देश इनबक्सबाट यसलाई तुरून्त मेटाउनुहोस्।
सँधै तपाईंको फोनको लागि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेसन प्रयोग गर्नुहोस् किनभने तपाईंको एसएमएसहरु यो एप्लीकेसन प्रयोग गर्दा ईन्क्रिप्ट भइन्छन्। एप्लीकेसन डाउनलोड गर्नको लागि Android दीभाइेसले सधैं प्लय्स्टोर प्रयोग गर्नु होस् र iOS दीभाइेसले एप स्टोर प्रयोग गर्नु होस्।
नियमित आधारमा तपाईंको लगइन पासवर्ड र लेनदेन पिन परिवर्तन गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको फोन हरायो भने, कृपया तुरुन्त हामीलाई सेवा ब्लकको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् ताकि अनधिकृत पहुँच प्रतिबन्धित होस्।
म अड्केमा मैले के गर्नुपर्दछ्?
यदि तपाईं कुनै पनि समयमा अड्किनु भएको छ भने कृपया हाम्रो मोबाइल बैंकिंङ्ग support unit काठमाडौंको हेड अफिस कमलादीमा बिहान १० बजे देखी साझा ५ बजे सम्म कल गरेर सम्पर्क गर्नुहोस् वा card@jbbl.com.np मा ईमेल पठाउनुहोस्।
टेलिफोन नम्बर: ०१४४२५५७५
कस्तो प्रकारको कार्ड JBBLले जारी गर्दछ?
डोमेस्टिक भिसा डेबिट कार्ड (निजीकृत र तत्काल)।
कार्डको वैधता कति लामो छ?
कार्ड6बर्षको लागि मान्य छ।
कार्डहरू कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ?
JBBL(जेबीबीएल) भिसा डेबिट कार्डहरू नेपाल र भारतमा नगद निकासीका साथै POS खरीदको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के म मेरो इच्छा अनुसार कार्ड बन्द गर्न सक्दछु?
तपाइँले इच्छा अनुसार कार्ड कुनै पनि समय बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। कार्ड बन्द गर्नका लागि रु. १०० रूपियाँ लाग्दछ।
यदि मैले पिन नम्बर बिर्सें भने के हुन्छ?
कुनै पनि JBBL शाखामा लिखित आवेदन पेस गरेपछि, एक नयाँ पिन एक हप्ता भित्र उत्पन्न गरिनेछ।
के मैले पुन: पिन उत्पादनको लागि पैसा तिर्नु पर्छ?
पिन पुन: उत्पन्न गर्नको लागि रु .१५० चार्ज लग्नेछ।
के मैले पहिलो पटक एटीएम पिन परिवर्तन गर्नका लागि JBBL टर्मिनलमा जानुपर्छ?
तपाइँले पहिलो पटक पिन परिवर्तन कुनै पनि NEPS सदस्य बैंकको एटीएमबाट गर्न सक्नुहुनेछ।
JBBL डेबिट भिसा कार्डको लागि कसले आवेदन दिन सक्दछन्?
हामी नाबालिगहरू, संयुक्त बचत खातावालाहरू र जो पूर्ण रूपमा अशिक्षित छन् (हस्ताक्षर गर्न नसक्ने) उहाँहरु बाहेक बैंकको कुनै पनि शाखासँग एकल / बचत खाता भएका सबै व्यक्तिको लागि कार्ड जारी गर्दछौँ ।
एक पटक आवेदन पेस गरेपछि ग्राहकलाई कार्ड वितरण गर्न कति समय लाग्दछ?
Name Printed कार्ड कार्ड सेन्टरबाट आवेदन पेस गरेको ७ दिन भित्र लिन सकिन्छ र कुरियर द्वारा लिइएको डेलिभरीको लागि अतिरिक्त समय लग्नेछ।
नयाँ कार्डको लागि कति शुल्क लिन्छ?
सामान्य कार्डको लागि तपाईले रु. ७००(पूर्ण शुल्क) वा रु. ७५०(किश्त बन्धिमा रु. २५० प्रत्येक २ बर्षमा तिर्नु पर्छ) जुन ६ बर्षको लागि मान्य हुनेछ। (* बिभिन्न खातामा प्रदान गरिएको प्रस्ताव अनुसार फरक हुन सक्दछ)
सामान्य भिसा डेबिट कार्ड र तत्काल कार्ड बीच के भिन्नता हुन्छ?
सामान्य भिसा डेबिट कार्डमा ग्राहकको नाम कार्डको अनुहारमा छापिएको हुन्छ र इन्स्ट्यान्ट कार्डमा ग्राहकको नामको ठाउँमा इन्स्टान्ट कार्ड छापिएको हुन्छ। तत्काल कार्ड तुरुन्त ग्राहकलाई डेलिभर गर्न सकिन्छ र एक घण्टा भित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य सुविधाहरू उस्तै हुन्छन्।
म मेरो कार्ड नेपालमा कति पटक प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईले रकम सीमा रु. ६०,००० / - भन्दा बढि ननाघी दिनमा १० पटकसम्म कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक लेनदेनमा अधिकतम रु. २०,००० / - झिक्न सक्नुहुन्छ।
के नाबालिकले कार्डको लागि आवेदन दिन सक्दछ?
नाबालिकले कार्डको लागि आवेदन दिन मिल्दैन।
के संयुक्त खातावालहरूले प्रत्येक सदस्यका लागि छुट्टै कार्डहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्?
हामी संयुक्त खातावालहरूलाई कार्ड जारी गर्दैनौं।
मेरो कार्ड तयार छ वा छैन कसरी थाहा हुन्छ?
तपाईको कार्ड तपाईको शाखामा डेलिभर भएपछि तपाईले एसएमएस प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यदि मेरो कार्ड हरायो / चोरी भयो भने के हुन्छ?
कृपया तुरुन्त JBBL लाई कार्ड ब्लक गर्नको लागि सूचित गर्नुहोस्। बैंकले तपाईंको लिखित अनुरोधमा हराएको / चोरी कार्डको प्रतिस्थापन लागू शुल्कको साथ जारी गर्नेछ (रु .१०० कार्ड ब्लक शुल्क + रु .७०० कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क)
मैले एटीएमबाट नगद निकाल्न खोज्दा मेसिनले नगद वितरण गरेन तर मेरो खाता डेबिट भयो। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्छ?
कृपया नजिकको शाखा भ्रमण गर्नुहोस् र लिखित गुनासो पेश गर्नुहोस् जुनमा तपाईंको नाम, खाता नम्बर, कार्ड नम्बर, लेनदेन मिति, लेनदेन रकम, एटीएम टर्मिनल नाम, आदि समावेश गर्नुहोस। बैंकले लेनदेन प्रमाणित भएपछि रकम फिर्ता गर्नेछ।
यदि मेरो कार्ड एटीएममा फँसेको/ कैद भएको छ भने मैले के गर्नु पर्दछ?
JBBL एटीएम को मामलामा, तपाईं आफ्नो मान्य आईडी कार्डको साथ त्यही दिन एटीएम शाखामा सम्पर्क राख्नु पर्नेछ ।
अन्य बैंकको एटीएमको मामलामा, तपाईंले अधिकृत व्यक्तिको हस्ताक्षर र स्ट्याम्पको साथ JBBL बाट एक आवेदन प्राप्त गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंले मान्य आईडी कार्डको साथ बैंकमा(जहाँ तपाईंको कार्ड फसाइएको छ) पेश गर्नु पर्नेछ ।
अन्य बैंकको एटीएम मेशिनहरूमा JBBL कार्ड प्रयोग गर्दा कति शुल्कहरू लाग्दछन्?
रु. ३० शुल्क प्रत्येक लेनदेनको लागि लागू हुनेछ (नेपाल भित्र) र भारतमा प्रत्येक एटीएम लेनदेनको लागि रु. २५० रुपैयाँ लग्नेछ। जेबीबीएल एटीएम प्रयोगको लागि जेबीबीएल a/ c होल्डरलाई कुनै शुल्क लाग्नेछैन।
के लेनदेनको कुनै सीमा छ?
के म मेरो कार्ड पाउने बित्तिकै एटीएम लेनदेन गर्न सक्छु?
पहिले, कार्ड सक्रिय हुनुपर्दछ। तपाइँको कार्ड कार्ड वितरण समय (कार्यालय घण्टा) को १ घण्टा भित्र सक्रिय हुनेछ। जरुरीताको मामिलामा, तपाईको शाखालाई कार्डलाई तुरुन्त सक्रिय पार्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँलाई पहिलो प्रयासमा पिन परिवर्तन गर्न सोधिनेछ।
के मैले कार्ड लेनदेनको विवरण थाहा पाउन सक्छु?
तपाईले तपाईंको स्टेटमेन्ट सहित कार्ड मार्फत गरिएका सबै लेनदेनहरू बैंकबाट संकलन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले मोबाइल बैंकिङ सुविधा सक्रिय गर्नु भएको छ भने तपाईले प्रतेक एटीएम लेनदेनमा SMS(एसएमएस) पाउनुहुनेछ।
के म अरूलाई मेरो कार्ड प्रयोग गर्न दिन सक्छु?
कृपया अरूलाई कार्ड हस्तान्तरण नगर्नुहोस् र तपाईंको पिन नम्बर खुलासा नगर्नुहोस्। अन्य गैर-अधिकृत व्यक्तिहरूले कार्डको प्रयोग गरेर लेनदेनको कारण हुने कुनै नोक्सानीको लागि बैंक जिम्मेवार हुनेछैन।